Bad Parenting - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဖမေမေမေအေားလုံးဟာ ကိုယျ့သားသမီးလေးတှကေို အကောငျးမှနျဆုံး ဖွဈစခေငျြတတျကွပါတယျ… ဒါပမေယျ့ အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံး ဖွဈအောငျ ပွုလုပျရာကနေ ကလေးရဲ့စိတျကို မထညျ့တှကျမိတာ၊ သတိလကျလှတျပွုမိတာ၊ခြုပျခယျြတာတှေ ရှိတတျပါတယျ… ဒါကွောငျ့ မိမိရဲ့ အုပျထိနျးမှုသာ လှဲမှားခဲ့မယျဆိုရငျ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အကြိုးဆကျလေးတှကေို ပွောပွခငျြပါတယျ..
၁- သငျ့ကလေး သငျ့အပျေါ ကလနျကဆနျလုပျနတောဟာ လုံလောကျတဲ့ ကွငျနာမှု မပေးလို့ပါ
၂ – သငျ့ကလေး အရငျထကျ ပိုပွီး လိမျညာပွောတတျလာဟာ သငျ သူ့ရဲ့အမှားသေးသေးလေးတှအေပျေါ လှနျလှနျကဲကဲ အပွဈတငျဖူးလို့ပါ
၃ – သငျ့ကလေး အားငယျတတျလှနျးတာဟာ သငျ သူ့ကိုနှေးထှေးဖေးမတာထကျ အကွံလောကျပဲ ပေးပီး လုပျခိုငျးနလေို့ပါ
၄ – သငျ့ကလေး မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှုနညျးခွငျးဟာ သငျ သူငယျငယျတုနျးက လူကွားသူကွားထဲ အျောငေါကျဆဲဆို ပွဈဒဏျခမြှတျဖူးလို့ပါ
၅- သငျ့ကလေးကို လိုလသေေးမရှိဝယျပေးနတေဲ့ကွားက သူမြားပစ်စညျးတှေ ယူတတျနတောဟာ သူတို့ကွိုကျတာ သူတို့ကို ရှေးခယျြခှငျ့မပေးလို့ပါ
၆ – သငျ့ကလေး ကွောကျတတျလှနျးနတောဟာ သငျ ဘာမဆို အမွဲလိုကျကူညီပေးနလေို့ပါ။သူတို့တှတေဲ့ အခကျအခဲတိုငျး ကူညီမပေးသငျ့ပါ
၇ – သငျ့ကလေး မနာလိုဝနျတိုတတျလာခွငျးဟာ သငျ သူတို့ကို သူမြားတှနေဲ့ အမွဲယှဉျပွောတတျလှနျးလို့ပါ
၈ – သငျ့ကလေး အလှယျတကူ စိတျဆိုးတတျတာဟာ သငျ သူ့ကို လုံလုံလောကျလောကျမခြီးမှနျးလို့ တလှဲဒေါသထှကျပွကွတာပါ
၉ – သငျ့ကလေး သူတဈပါးခံစားခကျြကို အလေးမထားတတျတာဟာ သငျကိုယျတိုငျက သူမြားခံစားခကျြကို အရေးမကွီးဖူးလို့ ထငျအောငျ တလှဲဆုံးမထားလို့ပါ
၁၀ – သငျ့ကလေး မပွောရဲမဆိုရဲလြှိုဝှကျလှနျးတာဟာ သငျ ဘာကိစ်စမဆို သူ့ကို ပွဈတငျပွောဆိုတတျလှနျးလို့ပါ
၁၁ – သငျ့ကလေး ရိုငျးစိုငျးတတျလာတာဟာ မိဘတှေ(သို့)တခွားသူတှရေဲ့ တလှဲအမူအကငျြ့တှကေို အမှနျထငျနလေို့ပါ
၁၂- မိမိကလေးကို ဂရုစိုကျနိုငျနှေးထှေးမှုပေးနိုငျပွီး သခြောပြိုးထောငျပေးပါက စညျးကမျးရှိ၍လိမ်မာသော ကလေးမြား ဖွဈလာပွီး မိမိကိုယျတိုငျက ဂရုမစိုကျ တာဝနျမယူပါက ကလေးဆိုးလေးမြား ဖွဈလာနိုငျပါတယျ
ခုဆိုရငျ ခတျေစနဈပွောငျးလာတာနဲ့အမြှ ကလေးတှေးရဲ့ ဉာဏျရညျတှေးချေါမှုဟာလညျး မွငျ့တကျလာတယျ၊ ခတျေနဲ့ လိုကျပီး တှေးချေါလာတယျ .. ဒီလိုအခါမှာ ဖဖေမေမေတေို့ကလဲ သူတို့လေးတှရေဲ့ စိတျဖွဈတညျပွောငျးလဲမှုကို သခြောစောငျ့ကွညျ့ရမယျ. ပွုပွငျထိနျးကြောငျးရပါမယျ…
ဒါဆိုရငျ အနာဂတျကွယျပှငျ့လေးတှရေဲ့ ဖဖေမေမေေ ဖွဈဖို့…. သခြောကောငျးမှနျတဲ့ အုပျထိနျးမှုတော့ လိုပီပေါ့..
:12 signs of bad parenting
:Are you one of them?
​ဖေ​မေ​မေ​မေအားလုံးဟာ ကိုယ့်​သားသမီး​လေး​တွေကို အ​ကောင်းမွန်​ဆုံး ဖြစ်​​စေချင်​တတ်​ကြပါတယ်​… ဒါ​ပေမယ့်​ အ​ကောင်းတကာ့ အ​ကောင်းဆုံး ဖြစ်​​အောင်​ ပြုလုပ်​ရာက​နေ က​လေး​ရဲ့စိတ်​ကို မထည့်​တွက်​မိတာ၊ သတိလက်​လွတ်​ပြုမိတာ၊ချုပ်​ချယ်​တာ​တွေ ရှိတတ်​ပါတယ်​… ဒါ​ကြောင့်​ မိမိရဲ့ အုပ်​ထိန်းမှုသာ လွဲမှားခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ ဖြစ်​လာနိုင်​တဲ့ အကျိုးဆက်​​လေး​တွေကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​..
၁- သင့်​က​လေး သင့်​အ​ပေါ် ကလန်​ကဆန်​လုပ်​​နေတာဟာ လုံ​လောက်​တဲ့ ကြင်​နာမှု မ​ပေးလို့ပါ
၂ – သင့်​က​လေး အရင်​ထက်​ ပိုပြီး လိမ်​ညာ​ပြောတတ်​လာဟာ သင်​ သူ့ရဲ့အမှား​​သေး​သေး​လေး​တွေအ​​ပေါ် လွန်​လွန်​ကဲကဲ အပြစ်​တင်​​​ဖူးလို့ပါ
၃ – သင့်​က​လေး အားငယ်​တတ်​လွန်းတာဟာ သင်​ သူ့ကို​နွေး​ထွေး​ဖေးမတာထက်​ အကြံ​လောက်​ပဲ ​ပေးပီး လုပ်​ခိုင်း​နေလို့ပါ
၄ – သင့်​က​လေး မိမိကိုယ်​ကိုယုံကြည်​မှုနည်းခြင်းဟာ သင်​ သူငယ်​ငယ်​တုန်းက လူကြားသူကြားထဲ ​အော်​​ငေါက်​ဆဲဆို ပြစ်​ဒဏ်​ချမှတ်​ဖူးလို့ပါ
၅- သင့်​က​လေးကို လို​လေ​သေးမရှိဝယ်​​ပေး​နေတဲ့ကြားက သူများပစ္စည်း​တွေ ယူတတ်​​နေတာဟာ သူတို့ကြိုက်​တာ သူတို့ကို ရွေးချယ်​​ခွင့်​မ​ပေးလို့ပါ
၆ – သင့်​က​လေး ​ကြောက်​တတ်​လွန်း​နေတာဟာ သင်​ ဘာမဆို အမြဲလိုက်​ကူညီ​ပေး​နေလို့ပါ။သူတို့​တွေ့တဲ့ အခက်​အခဲတိုင်း ကူညီမ​ပေးသင့်​ပါ
၇ – သင့်​က​လေး မနာလိုဝန်​တိုတတ်​လာခြင်းဟာ သင်​ သူတို့ကို သူများ​တွေနဲ့ အမြဲယှဉ်​​ပြောတတ်​လွန်းလို့ပါ
၈ – သင့်​က​လေး အလွယ်​တကူ စိတ်​ဆိုးတတ်​တာဟာ သင်​ သူ့ကို လုံ​လုံ​လောက်​​လောက်​မချီးမွန်းလို့ တလွဲ​ဒေါသထွက်​ပြကြတာပါ
၉ – သင့်​က​လေး သူတစ်​ပါးခံစားချက်​ကို အ​လေးမထားတတ်​တာဟာ သင်​ကိုယ်​တိုင်​က သူများခံစားချက်​ကို အ​ရေးမကြီးဖူးလို့ ထင်​​အောင်​ တလွဲဆုံးမထားလို့ပါ
၁၀ – သင့်​က​လေး မေ​ပြာရဲမဆိုရဲလျှိုဝှက်​လွန်းတာဟာ သင်​ ဘာကိစ္စမဆို သူ့ကို ပြစ်​တင်​​ပြောဆိုတတ်​လွန်းလို့ပါ
၁၁ – သင့်​က​လေး ရိုင်းစိုင်းတတ်​လာတာဟာ မိဘ​တွေ(သို့)တခြားသူ​တွေရဲ့ တလွဲအမူအကျင့်​​တွေကို အမှန်​ထင်​​နေလို့ပါ
၁၂- မိမိက​လေးကို ​ဂရုစိုက်​နိုင်​​နွေး​ထွေးမှု​ပေးနိုင်​ပြီး ​သေချာပျိုး​ထောင်​​ပေးပါက စည်းကမ်းရှိ၍လိမ္မာ​သော က​လေးများ ဖြစ်​လာပြီး မိမိကိုယ်​တိုင်​က ဂရုမစိုက်​ တာဝန်​မယူပါက က​လေးဆိုး​လေးများ ဖြစ်​လာနိုင်​ပါတယ်​
ခုဆိုရင်​ ​ခေတ်​စနစ်​​ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ က​လေး​တွေးရဲ့ ဥာဏ်​ရည်​​တွေး​ခေါ်မှုဟာလည်း မြင့်​တက်​လာတယ်​၊ ​ခေတ်​နဲ့ လိုက်​ပီး ​တွေး​ခေါ်လာတယ်​ .. ဒီလိုအခါမှာ ​ဖေ​ဖေ​မေ​မေတို့ကလဲ သူတို့​လေး​တွေရဲ့ စိတ်​ဖြစ်​တည်​​ပြောင်းလဲမှုကို ​သေချာ​စောင့်​ကြည့်​ရမယ်​. ပြုပြင်​ထိန်း​ကျောင်းရပါမယ်​…
ဒါဆိုရင်​ အနာဂတ်​ကြယ်​ပွင့်​​လေး​တွေ​ရဲ့ ​ဖေ​​ဖေ​မေ​မေ ဖြစ်​ဖို့…. ​သေချာ​ကောင်းမွန်​တဲ့ အုပ်​ထိန်းမှု​တော့ လိုပီ​ပေါ့..
နှလုံးရောဂါ စရှိပွီဆို ဘယျလိုနထေိုငျသငျ့သလဲ?